Izindaba - Ukushaja I-Alliance: Izinqwaba ezintsha zokushaja umphakathi zengezwe ngoMeyi, zenyuka ngama-59.5% unyaka nonyaka
NgoJuni 11, imininingwane ekhishwe yiChina Charging Union ikhombise ngokusemthethweni ukuthi kusukela ngoMeyi 2018, amayunithi angamalungu kulo mfelandawonye abika inani eliphelele lama-piles angu-266 231 okushaja umphakathi, futhi ngamalungu alo mfelandawonye, ​​izinqwaba zezimoto zathathwa amasampula ngama-441,422 izingcezu zedatha yolwazi. Kusetshenziswe inani lama-piles amashaja angama-708,000.
Ngokuya kwezinqwaba zokushaja zomphakathi, kunezinqwaba zokushaja eziyi-116761 ze-AC, izinqwaba zokushaja ezingama-84174 DC, kanye nezinqwaba zokushaja ezihlanganisiwe ezingama-65296. NgoMeyi 2018, kwanezelwa izinqwaba zokushaja zohlobo lomphakathi ezingama-4,173 kunango-Ephreli 2018. Kusukela ngoMeyi 2017 kuya ku-Ephreli 2018, kwengezwa izinqwaba zokushaja zohlobo lomphakathi ezingaba ngu-8 273 njalo ngenyanga, kwathi ngoMeyi 2018, izinga lokukhula lalingu-59.5%.
Isibalo sabasebenza ngobuningi ezweni sifike ku-16 (inani lezindawo zokushaja> = 1000), futhi amandla akhethekile abe ngowokuqala. Kwakhiwe izinqwaba zokushaja eziyi-110,857, kwalandelwa yiGridi Yombuso kanye nezinqwaba zokushaja ezingama-56,549.
Izinqwaba eziyishumi eziphezulu zokushaja umphakathi esifundeni sokuphatha esifundazweni yilezi: 40,663 eBeijing, 34,313 eShanghai, 32,701 eGuangdong, 27,586 eJiangsu, 20,316 eShandong, 12,759 eZhejiang, 11,555 eTianjin, kanye no-11 232 e-Hebei. , 10,757 e-Anhui no-7,527 eHubei.
Inani lezindawo zokushaja zikahulumeni nezizimele ezifundazweni, ezifundeni nasemadolobheni lenyuke kancane, futhi nenani lokushaja ugesi lenyuke kancane, obekujwayelekile ukuthi kufane nenyanga edlule.
Amandla okushaja kuzwelonke agxile kakhulu ePearl River Delta, eYangtze River Delta nasezifundeni ezimaphakathi nasentshonalanga. IBeijing ibuswa kakhulu yizimoto zabagibeli abazimele; ukugeleza kukagesi eGuangdong, Shaanxi, Jiangsu, Shandong, Hubei, Sichuan naseFujian ikakhulukazi ngebhasi. Izimoto ezikhethekile zisetshenziswa kakhulu, zenezelwa yizimoto zabagibeli; Ukuhamba kukagesi kukaShanxi kugxile kakhulu ematekisini, enezelwa yizimoto zabagibeli. Ukusetshenziswa kwamandla kwezimoto ezikhethekile njengamabhasi kagesi nokuqasha kusobala.
Izifundazwe namadolobha ayishumi ahamba phambili ngokushaja ugesi anokusetshenziswa kukagesi ezifundazweni eziyisishiyagalombili nasemadolobheni anikelwe kakhulu ngamabhasi kagesi namatekisi. Phakathi kwabo, isiFundazwe saseGuangdong sihole ngama-kWh ayizigidi ezingama-320.29.
Kusukela ngoMeyi 2018, ngamalungu ombimbi lwabakhiqizi bezimoto (i-BYD, i-SAIC, i-BAIC, i-Jianghuai, i-Tesla, i-Changan, i-Geely, i-Chery, i-Dongfeng Electric, i-Dongfeng Nissan, i-Guangzhou Automobile, i-FAW, i-Zhidou) izinqwaba zesampula Idatha yemininingwane 441,422, kanti inani lezinqwaba zokushaja ezihlulekile lalingama-31.04%. Phakathi kwazo, inani lezinqwaba zokushaja ezingakwazanga ukwakhiwa ngenxa yokuthi "abasebenzisi beqembu bazakhela inqwaba yabo" lalingu-16.27%, elingazange lifaniswe ngenxa yokuthi "impahla esendaweni ehlala abantu ayizange ibambisane". Inani lezinqwaba zokushaja ezakhiwe lalingu-4.75%. Inani lezinqwaba zokushaja ezingakwazanga ukwakhiwa ngenxa yokuthi “ayikho indawo engashintshi yokupaka endaweni yokuhlala” lalingu-2.56%. Inani lezinqwaba zokushaja ezingakwazanga ukwakhiwa ngenxa "yokushaja ngeziteshi ezinikezelwe" lalingu-2.60. %, ngenxa yokuthi "ayikho indawo yokupaka engaguquki emsebenzini", inani lamaphayiphu okushaja angakwakhiwa ngu-0.7%. Isilinganiso samaphayiphu okushaja angenakwakhiwa ngenxa "yobunzima bokushaja ugesi lapho uhlala khona" bekungu-0.17%.